မဲဆန်ဒရှငျတှေ ဘာ့ကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျ့နနေဲ့ မဲထညျ့ရမယျ့ကိုယျစားလှယျတှကေို မသိကွသလဲ? – Voice of Myanmar
မဲဆန်ဒရှငျတှေ ဘာ့ကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျ့နနေဲ့ မဲထညျ့ရမယျ့ကိုယျစားလှယျတှကေို မသိကွသလဲ?
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကငျြးပဖို့ ၂၅ ရကျသာ လိုတော့တဲ့အခြိနျမှာ မန်တလေးမွို့က မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူတှေ အနနေဲ့ရှေးကောကျပှဲအပျေါ စိတျဝငျစားမှု ရှိမရှိ၊ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အသိပညာ မညျမြှရှိသလဲနဲ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအပွီးမှာဘယျလို အစိုးရမြိုးကို လိုလားသလဲ စတဲ့ အခကျြတှကေို သိရှိနိုငျဖို့ မန်တလေးမွို့ပျေါမှာရှိတဲ့ မွို့ဟောငျးဈေး၊ ၄၁လမျး ကုနျစိမျးတနျးညဈေး၊ ရာသီစာပုရဈဈေးတို့က ဈေးသညျ၊ ဈေးဝယျတှကေို Voice Of Myanmar (VOM)က စဈတမျးတခု ကောကျယူခဲ့ပါတယျ။
ဒီစဈတမျးမှာ တိတိကကြပြါဝငျဖွဆေိုသူ ၆၆ ဦးရှိပွီး အမြိုးသား ၁၀ဦးနဲ့ အမြိုးသမီး ၅၆ ဦးတို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီထဲမှာ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျ့ရကျကိုသိသူက လေးပုံတပုံလောကျကပဲ သိပွီး မိမိဆန်ဒနယျက ကိုယျစားလှယျလောငျးကို မသိသူတှခေညျြးဖွဈနပေါတယျ။
ပါဝငျဖွဆေိုသူ ၆၆ ဦးအနကျ ရှေးကောကျပှဲအပျေါ စိတျဝငျစားသူ ၅၉ ဦး၊ စိတျမဝငျစားသူ ၄ ဦး၊ မဖွဆေိုသူ ၃ ဦး ရှိပါတယျ။
ပါဝငျဖွဆေိုသူ ၆၆ ဦးအနကျ မဲပေးမညျ့သူ ၆၂ဦး၊ မဲမပေးမညျ့သူ ၂ ဦး၊ မဲပေးရနျ မသခြောသေးသူ ၂ဦး ရှိပါတယျ။
ပါဝငျဖွဆေိုသူ ၆၆ ဦးအနကျ မဲစာရငျးစဈပွီးသူ ၄၇ ဦး၊ မဲစာရငျးမစဈရသေးသူ ၁၄ ဦး၊ မဖွဆေိုသူ ၅ ဦး ရှိပါတယျ။
ပါဝငျဖွဆေိုသူ ၆၆ ဦးအနကျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျ့ရကျကို သိရှိသူ ၁၇ ဦး၊ ရှေးကောကျပှဲကငျြးမမညျ့ရကျကို လုံးဝ မသိရှိသူ၂၆ ဦး၊ ရှေး‌ကောကျပှဲကငျြးပမညျ့ရကျကို အတိအကြ မသိရှိသူ ၂၃ ဦး ရှိပါတယျ။
ပါဝငျဖွဆေိုသူ ၆၆ ဦးအနကျ မိမိတို့ မွို့နယျ ကိုယျစားပွုယှဉျပွိုငျမယျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျကို မသိရှိသူက ရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး မဲဆန်ဒရှငျတှေ အသိပညာရရှိမှု နညျးပါးတဲ့ကိစ်စ မန်တလေးတိုငျး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲဥက်ကဌ ဦးရှိနျဝငျးကို VOM က ဆကျသှယျမေးမွနျးကွညျ့တဲ့အခါမှာ
“ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ လလေ့ာမှု အားနညျးလို့သာ ရှေးကောကျပှဲလုပျမယျ့ရကျကို မသိကွတာပါ။ ကြှနျတျောတို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနနေဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ကူးစကျမှုကွောငျ့ အရငျရှေးကောကျပှဲတှလေောကျ ပညာပေးတာတှေ မလုပျနိုငျပမေယျ့ သတငျးစာ၊တီဗီတှကေနတေဆငျ့ ရှေးကောကျပှဲရကျကို ကွငွောပေးတာအပွငျ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ရှေးကောကျပှဲအသိပညာပေးတာတှေ လုပျနပေါတယျ”
ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုကို အသိပညာပေးနတေဲ့ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးဖွဈတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာပွညျသူ့လှုပျရှားမှုအဖှဲ့ ( PACE )ရဲ့ အစီအစဉျမနျနဂြော ဦးဟနျစိုးထှနျးကတော့
“၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲအပွီး ကနြျောတို့ လုပျတဲ့စဈတမျးမှာ ကိုယျ့မွို့နယျရဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျကိုပငျ မသိတာ ၇၀ ရာနုနျးရှိတယျ ကိုယျ့ရပျရှာရဲ့ အုပျခြုပျရေးမှူးနာမညျကိုသိတာက ၈၀ရာနုနျးလောကျတှရေ့တယျ။ ခုတလော ရှေးကောကျပှဲနဲ့ဆိုငျတဲ့အသိပညာပေးတာတှကေတော့
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ရှေးကောကျပှဲအသိပညာပေးဖို့အတှကျ mvoters ဆိုတဲ့ app ကို ပွုလုပျထားတယျ။ PACE အဖှဲ့အနနေဲ့လညျး Phandeeyar နဲ့ပေါငျးပွီး votemm ဆိုတဲ့ app ကို လှငျ့တငျထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသိပညာပေးတာကိုစောစောစီးစီးလုပျလို့မရဘဲ ကပျမှ လုပျရတဲ့အတှကျ အခကျအခဲတော့ရှိတယျ။ ပါတီတှအေနနေဲ့လညျး ပါတီကိုတငျမဟုတျဘဲကိုယျစားလှယျလောငျးကိုပါ မဲဆန်ဒရှငျတှေ သိအောငျ လုပျဖို့လိုတယျ။
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကလညျး information တှကေို soft copy အနနေဲ့ ရအောငျ လုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ” လို့ ရှငျးပွပါတယျ။
Voice of Myanmar (VOM) က ကောကျယူကွညျ့တဲ့ စဈတမျးမှာ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအပွီး ဘယျလို အစိုးရကိုလိုလားသလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ဖွကွေားရာမှာ ဖွကွေားသူတှရေဲ့ တဝကျလောကျက အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျနဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို မဲပေးမယျလို့သာ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။ ကနျြတဝကျလောကျက ပွညျသူ့အတှကျ အကြိုးပွုနိုငျမယျ့ အစိုးရ၊ ပညာရေးကိုအလေးထားမယျ့ အစိုးရ၊ ဒီမိုကရစေီ အမှနျတကယျ ဆောငျကဉျြးပေးနိုငျမယျ့ အစိုးရ စတဲ့ အဖွတှေကေို ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
ဖွဆေိုသူတခြို့က ရှေးကောကျပှဲမှာ ဆန်ဒမဲသှားပေးဖို့အတှကျ ကနျြးမာရေးအရ စိုးရိမျမှုရှိကွပွီး မဲပေးရာမှာ အသုံးပွုရမယျ့တံဆိပျတုံး၊ ဘောပငျတှကေနတေဆငျ့ ရောဂါပိုး မကူးစကျစဖေို့ လိုကွောငျး ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို သခြောပွငျဆငျဖို့တိုကျတှနျးခဲ့ကွတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
#votereducation #Voiceofmyanmar #electionsurvey #VOM #ရှေးကောကျပှဲ
မဲဆန္ဒရှင်တွေ ဘာ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့နဲ့ မဲထည့်ရမယ့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မသိကြသလဲ?
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ၂၅ ရက်သာ လိုတော့တဲ့အချိန်မှာ မန္တလေးမြို့က မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိမရှိ၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အသိပညာ မည်မျှရှိသလဲနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ဘယ်လို အစိုးရမျိုးကို လိုလားသလဲ စတဲ့ အချက်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့ဟောင်းဈေး၊ ၄၁လမ်း ကုန်စိမ်းတန်းညဈေး၊ ရာသီစာပုရစ်ဈေးတို့က ဈေးသည်၊ ဈေးဝယ်တွေကို Voice Of Myanmar (VOM)က စစ်တမ်းတခု ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီစစ်တမ်းမှာ တိတိကျကျပါဝင်ဖြေဆိုသူ ၆၆ ဦးရှိပြီး အမျိုးသား ၁၀ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၅၆ ဦးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုသိသူက လေးပုံတပုံလောက်ကပဲ သိပြီး မိမိဆန္ဒနယ်က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မသိသူတွေချည်းဖြစ်နေပါတယ်။
ပါဝင်ဖြေဆိုသူ ၆၆ ဦးအနက် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားသူ ၅၉ ဦး၊ စိတ်မဝင်စားသူ ၄ ဦး၊ မဖြေဆိုသူ ၃ ဦး ရှိပါတယ်။
ပါဝင်ဖြေဆိုသူ ၆၆ ဦးအနက် မဲပေးမည့်သူ ၆၂ဦး၊ မဲမပေးမည့်သူ ၂ ဦး၊ မဲပေးရန် မသေချာသေးသူ ၂ဦး ရှိပါတယ်။
ပါဝင်ဖြေဆိုသူ ၆၆ ဦးအနက် မဲစာရင်းစစ်ပြီးသူ ၄၇ ဦး၊ မဲစာရင်းမစစ်ရသေးသူ ၁၄ ဦး၊ မဖြေဆိုသူ ၅ ဦး ရှိပါတယ်။
ပါဝင်ဖြေဆိုသူ ၆၆ ဦးအနက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကို သိရှိသူ ၁၇ ဦး၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းမမည့်ရက်ကို လုံးဝ မသိရှိသူ ၂၆ ဦး၊ ရွေး‌ကောက်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်ကို အတိအကျ မသိရှိသူ ၂၃ ဦး ရှိပါတယ်။
ပါဝင်ဖြေဆိုသူ ၆၆ ဦးအနက် မိမိတို့ မြို့နယ် ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို မသိရှိသူက ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်တွေ အသိပညာရရှိမှု နည်းပါးတဲ့ကိစ္စ မန္တလေးတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဌ ဦးရှိန်ဝင်းကို VOM က ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ
“ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လေ့လာမှု အားနည်းလို့သာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်ရက်ကို မသိကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်မှုကြောင့် အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေလောက် ပညာပေးတာတွေ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် သတင်းစာ၊ တီဗီတွေကနေတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို ကြေငြာပေးတာအပြင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေးတာတွေ လုပ်နေပါတယ်”
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အသိပညာပေးနေတဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ( PACE )ရဲ့ အစီအစဉ်မန်နေဂျာ ဦးဟန်စိုးထွန်းကတော့
“၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ကျနော်တို့ လုပ်တဲ့စစ်တမ်းမှာ ကိုယ့်မြို့နယ်ရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုပင် မသိတာ ၇၀ ရာနုန်းရှိတယ် ကိုယ့်ရပ်ရွာရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနာမည်ကိုသိတာက ၈၀ရာနုန်းလောက်တွေ့ရတယ်။ ခုတလော ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိပညာပေးတာတွေကတော့
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးဖို့အတွက် mvoters ဆိုတဲ့ app ကို ပြုလုပ်ထားတယ်။ PACE အဖွဲ့အနေနဲ့လည်း Phandeeyar နဲ့ပေါင်းပြီး votemm ဆိုတဲ့ app ကို လွှင့်တင်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အသိပညာပေးတာကို စောစောစီးစီးလုပ်လို့မရဘဲ ကပ်မှ လုပ်ရတဲ့အတွက် အခက်အခဲတော့ရှိတယ်။ ပါတီတွေအနေနဲ့လည်း ပါတီကိုတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပါ မဲဆန္ဒရှင်တွေ သိအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း information တွေကို soft copy အနေနဲ့ ရအောင် လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်” လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
Voice of Myanmar (VOM) က ကောက်ယူကြည့်တဲ့ စစ်တမ်းမှာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဘယ်လို အစိုးရကိုလိုလားသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာမှာ ဖြေကြားသူတွေရဲ့ တဝက်လောက်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးမယ်လို့သာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဝက်လောက်က ပြည်သူ့အတွက် အကျိုးပြုနိုင်မယ့် အစိုးရ၊ ပညာရေးကို အလေးထားမယ့် အစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ့် အစိုးရ စတဲ့ အဖြေတွေကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖြေဆိုသူတချို့က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆန္ဒမဲသွားပေးဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးအရ စိုးရိမ်မှုရှိကြပြီး မဲပေးရာမှာ အသုံးပြုရမယ့် တံဆိပ်တုံး၊ ဘောပင်တွေကနေတဆင့် ရောဂါပိုး မကူးစက်စေဖို့ လိုကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို သေချာပြင်ဆင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
#votereducation #Voiceofmyanmar #electionsurvey #VOM #ရွေးကောက်ပွဲ
Election, မဲဆန်ဒရှငျပညာပေး, မွနျမာသတငျး, သတငျး